एसइइ र एसएलसी परीक्षा एकापसमा भिन्न छन् । यसपालि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइइ लिइरहेको छ । सम्भवतः अर्को वर्षदेखि मधेस प्रदेशले नै वा प्रदेशहरुले नै यो परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अब कक्षा १२ को अन्त्यमा एसएलसी परीक्षा लिने कुरो आएको छ । कक्षा ११ को परीक्षा अब विद्यालय तहमै हुने करिब निश्चित
अहिले एसइइ परीक्षा चलिरहेको छ । देशको सम्पूर्ण प्रदेश र माध्यमिक तह पढाइ हुने सम्पूर्ण विद्यालय अहिले यसमा होमिएका छन् । प्रदेश २ अर्थात मधेसमा पनि यो परीक्षा चलिरहेको छ । परीक्षाको क्रममा अनेक किसिमका फरक कुराहरु आइरहेका छन् । कतै आमा र छोरी सँगै परीक्षा दिइरहेका छन् भने कतै उमेर निकै बढी भइसकेको परीक्षार्थी पनि परीक्षा दिइरहेका छन् । फरक शारीरिक क्षमता भएका मानिसले पनि परीक्षामा सहभागिता जनाएका छन् भने प्राविधिक धारका परीक्षार्थीले पनि परीक्षा दिइरहेका छन् । कोही पनि फेल हुन नपरोस् भन्ने उदेश्य परीक्षाको भएपछि कतिपयले यसलाई परीक्षा भन्दा पनि स्वेच्छाको रुपमा लिएका छन् । सबै उत्तीर्ण हुने अर्थात उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण केही पनि नभनिएको र हरेक परीक्षार्थीले करिब उत्तीर्णकै प्रमाणपत्र पाउने निश्चित रहने यो परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्र्थीले पहिलेका परीक्षाहरुभन्दा केही बढी राम्रो नतिजा ल्याउने यसकारण निश्चित छ कि गणितबाहेक करिब सबै विषयमा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत प्रयोगात्मक राखिएको छ । हरेक विद्यालयमा प्रयोगात्मक हुन्छ नै भन्ने छैन । अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले प्रयोगात्मक गरेकै छैन । अझ कतिपय विषयका शिक्षकलाई नै आफूले पढाएको विषयको प्रयोगात्मकमा कुन विद्यार्थीले कति नम्बर पाएका छन् भन्ने थाहा छैन । पहिलो पल्ट करिब हरेक विषयमा प्रयोगात्मक ल्याइएको र टेस्ट परीक्षा लिने चलन हटिसकेकोले कतिपय शिक्षकले नै यो थाहा पाउन सकेका छैनन् । जब शिक्षकलाई नै थाहा छैन भने विद्यार्थीलाई कुन विधिले कति वा कसरी कति अंक प्रयोगात्मकको पाइन्छ भन्ने नै थाहा नहुनु त्यत्ति आश्चर्यको विषय होइन । यद्यपि शिक्षक र शिक्षार्थी दुवैलाई यस विषयमा स्पष्ट थाहा दिने वा प्रयोगात्मक गराएर विद्यार्थीले गरेको कामको आधारमा उसले पाउनु पर्ने अंकको अधिकार दिने विद्यालयहरु नभएका होइनन् ।कुनै पनि परीक्षा विद्यार्थीले दिने हो । हामीले देखेका छौँ – विशेषज्ञहरु नै परीक्षामा फेल भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरु नै अनुत्तीर्ण हुने खबरहरु बारम्बार आइरहन्छन् । यसले फेल भनिएका विद्यार्थी वा परीक्षार्थी सम्पूर्णतः गुणस्तरहीन नै हुन्छन् भन्ने होइन । अझ बालबालिकाहरुको परीक्षाको सन्दर्भ केही फरक हुन्छ । विद्यार्थीहरु कक्षामा आफ्नो किसिमले परीक्षाको तयारी गरेका हुन्छन् । आफ्नो विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु एक्कासि बिना कुनै पूर्व अभ्यास अर्को विद्यालयमा परीक्षा दिन जान्छन् जहाँ तिनीहरले चिनेका साथीहरुबाहेक अरु कोही हुँदैनन् । सबै परीक्षार्थी आफ्नै धुनमा मस्त हुने हुनाले वास्तवमा कैयौँको भीडमा परीक्षार्थी आफू एक्लो महसुस गरेको हुन्छ । विद्यालयको कम्पाउन्डमा पस्ने बेलामा नै परीक्षार्थीले प्रहरीलाई देखेका हुन्छन् । विभिन्न समयमा केन्द्राध्यक्ष आउँछन् । कहिलेकाही जिल्लाका प्रमुखहरु पनि आएर परीक्षाको अनुगमन र निरीक्षण गर्छन् । परीक्षार्थीको मन र मस्तिष्कमा यस प्रकारको कुरोले निकै घर गरेको हुन्छ कि को आएर के भन्लान् र आफू कुनै गल्तीमा पो परिने हो कि ? कोही पनि फेल हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि अधिकांश परीक्षार्थीहरु अरुको विद्यालयमा गएर परीक्षा दिनुपर्ने कारणले मानसिकरुपमा डराएका हुन्छन् । पहिलो एक वा दुई दिन डर बढी हुन्छ र विस्तारै विद्यार्थीहरु त्यहाँको वातावरणमा घुलमिल हुन्छन् । परीक्षा भवन र परीक्षाको कोठा दुवै नयाँ र नौलो भएपछि जब परीक्षार्थीले आफूले पढेको पाठ र प्रश्नको उत्तर लेख्न थाल्छन् तब केही मात्रामा सकारात्मक मनोविज्ञानले आफूले केही गर्न सक्ने जनाउँछ । यथार्थमा बालबालिकाहरु परीक्षाको नियममा पहिले यसरी अभ्यस्त नभएको र एकैचोटि अन्यत्र गएर परीक्षा दिनुपर्दा पहिले नै केही त्रसित भएकै हुन्छन् । यही मनोवैज्ञानिक त्रासलाई कम गर्न अधिकांश परीक्षार्थीका अभिभावक पहिलो एक वा दुई दिन परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्दछन् जसले गर्दा एसइइ परीक्षाको प्रारम्भका दिनमा परीक्षा केन्द्रको आसपासमा अभिभावकहरुको केही भीड देखिन्छ । एसइइ र एसएलसी परीक्षा एकापसमा भिन्न छन् । यसपालि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइइ लिइरहेको छ । सम्भवतः अर्को वर्षदेखि मधेस प्रदेशले नै वा प्रदेशहरुले नै यो परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अब कक्षा १२ को अन्त्यमा एसएलसी परीक्षा लिने कुरो आएको छ । कक्षा ११ को परीक्षा अब विद्यालय तहमै हुने करिब निश्चित भइसकेको छ । यस अवस्थामा कक्षा १० को परीक्षा एसइइले धेरै हदसम्म अहिलेकै जस्तो अभिभावकको भीडभाड भइरहने परीक्षाको रुपमा रहिरहने देखिन्छ भने कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षाले पनि अभिभावकको ध्यान तान्ने देखिन्छ । अब जब कोही परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण नै हुदैनन् त अभिभावकको भीडभाड अर्थात चिन्ता किन ? राम्रो गरी उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अथवा उच्च ग्रेडसिट प्राप्त गर्न नै हुनुपर्छ । अथवा अर्को पनि ध्येय हुन सक्छ– त्यो हो पुरुषार्थको । एसइइ वा एसएलसी परीक्षाको केन्द्रमा म सबैभन्दा बढी कुद्छु भन्ने पुरुषार्थ देखाउन । यो पुरुषार्थ नक्कलीबाहेक अरु केही होइन । देखावटीपनमा रमाउनुबाहेक केही पनि होइन । वास्तवमा परीक्षा दिइरहेका बालबालिकाका यदि कोही अभिभावक केन्द्रमा जाँदैनन् भने त्यस अवस्थामा बालबालिकाले आफूले आफ्नो क्षमताको भरमा परीक्षा दिएको ठहरिन्छ । बालबालिकाले आफूले आफ्नो खुट्टामा उभिन खोजेको ठहरिन्छ । अभिभावकले गएर चिट चोराउने हो भने आफ्ना बालबालिकालाई परनिर्भर बनाएकै हो र उसको जीवनमाथि एक किसिमले आक्रमण गरेकै हो । परीक्षाको समयमा केन्द्रमा दिनहु पुग्ने र आफू वा अन्य कसैलाई लिएर परीक्षा चलिरहेको कोठासम्म पुग्ने प्रयास गर्ने चलनलाई नराम्रो भन्ने पर्दछ ।एसइइ वा एसएलसी परीक्षाको समयमा जिल्लाका प्रमुखहरुको पनि निकै चासो देखिन्छ । अभिभावकहरु त मरिमेटेरै सन्तानलाई बढीभन्दा बढी मदत गर्ने प्रयास गर्दछन् । सानैदेखि बालबालिकाको पढाइमा कुनै किसिमको कमजोरी नहोओस् भन्नेतिर ध्यान दिने अभिभावकलाई परीक्षाको चिन्ता हुँदैन । यस्ता हजारौँ अभिभावक छन् जो आफ्ना सन्तानमा क्षमता उमार्न चाहन्छन् र परीक्षामा आफ्नो उपस्थिति देखाउनै चाहँदैनन् । पढाइको समयमा ध्यान नदिने र परीक्षाको समयमा बढीभन्दा बढी प्रश्नको हल गरोस् भन्ने चाहना राख्ने अभिभावकहरु बालबालिकाप्रति दोहोरो गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धाको समयमा नपढेका बालबालिकाले केही पनि गर्न सक्दैनन् । उसलाई उसको प्रमाणपत्र नै बोझ बन्न पुग्दछ । अर्को पनि पक्ष रहेको छ, जसरी परीक्षाको समयमा जिल्ला वा केन्द्रका विभिन्न अधिकारीहरु परीक्षा केन्द्रमा पुगेर परीक्षालाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन चाहन्छन् त्यसै गरी पढाइको समयमा पनि दुई चारचोटि निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दै पुग्ने हो र पढाइ नियमित भए नभएको बुझ्ने, पढाइलाई अझ राम्रो बनाउन के कस्ता सुझाव वा सहयोग दिन सकिन्छ भन्नेतिर सोचिदिने हो भने बालबालिकाको हकमा निकै धेरै सकारात्मक काम हुन्थ्यो । विद्यालयमा अनुगमन कमजोर भएको हो भन्ने आम गुनासो अभिभावकहरुको रहेको छ ।